नेपाल आज | ‘म तेरी स्वास्नी हुँ ?’ (भिडियो सहित)
‘म तेरी स्वास्नी हुँ ?’ (भिडियो सहित)
शनिबार, २२ साउन २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज(SS)
शुक्रबार दिउँसो २ बजेको थियो । थापाथलीबाट सञ्जु परियार बा १ ह ३९२६ नम्बरको टेम्पोमा यात्रु लिएर माईतीघरतिर गइरहेकी थिइन् । अकस्मात उनलाई थापाथलीस्थित खाद्यसंस्थानअगाडी ट्राफिक प्रहरीले रोक्यो । उनले टेम्पोको अगाडि सिटमा दुईजना विद्यार्थी राखेकी थिईन । त्यही बिषयमा ट्राफिक–टेम्पोचालकबीच भनाभन शुरुभयो ।
ट्राफिकले सोधे, ‘यात्रु हालेको हो कि गुन्द्रुक ?’ टेम्पोचालक सञ्जुले जवाफ फर्काइन्, ‘साना बच्चाहरु हुन्, सजिलै दुई जना अटाउँछन् । राख्न मिल्छ ।’
‘मिल्ने के हो, नमिल्ने के हो ? सिकाइरहनु पर्दैन । सिकाउन रहर भए तालिम केन्द्र खोलेर बस्नु ।’– ट्राफिक प्रहरीले ओठे जवाफ फर्काए ।
ट्राफिक प्रहरी रहेछन् जवान योगेन्द्र कुँवर । विवाद त्यतिमै रोकिएन । ट्राफिक जवान कुँवरले पाँच सयको चिट काटे ।
त्यसपछि चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक माग्न थाले । सञ्जुले कागजात देखाउन केही समय लगाइन् । जवान कुँवर कड्किए, ‘छिटो गर । तिम्रो लाइसेन्समात्रै हेर्ने काम होइन हाम्रो ।’
एक त पाँच सयको चिट काटेको झोंक, अर्को तिर ट्राफिक प्रहरीको खप्की । दिनहुँ जस्तै ट्राफिक प्रहरीहरुसँग झेलेर बानी परेकी उनी पनि के कम ? ‘सबै कुरा तिम्ले भनेजस्तो हुन्छ ? सडक तिम्रो नम्बरी जग्गामा बनाको हो ? फूर्ति लगाउने ?’
विवाद बल्झिदै गयो । टेम्पोको झ्यालबाट औला ठड्याएर उनी विवाद गरि नै रहेकी थिइन् । ट्राफिक प्रहरी कुँवरले त्यसपछि सञ्जुको हात समाएर ताने । तानातान ३ मिनेट जति चल्यो ।
सञ्जु फेरि कराइन्, ‘तेरो स्वास्नी हो म ? किन हात समाउँछस् ?’
त्यही क्रममा उनले हात झडकारिन् । हातमा सामान्य चोट लाग्यो । रमितेहरुको भिड जम्मा हुन थालिसकेको थियो । ट्राफिक प्रहरीहरु पनि भेला भए । गन्तव्यमा नपुग्ने भएपछि यात्रुहरु भाडा नदिइ ओर्लिए । अर्को साधन समाते । महिला चालकको हात समाएको विषयमा गलत गरेको महशुस भएछ क्यारे उनी केही बेरमै भागे । आँखैले देखेको कुरा पनि कहिले काहीँ असत्य प्रमाणित गर्न खोजिन्छ । ट्राफिक प्रहरी कुँवरले सञ्जुको हात नसमाएको दाबी गरे । सञ्जुले कुटौला जस्तो गरेपछि जोगिन खोज्दा आक्कल झुक्कल समाइएको बताए ।
यस्ता घटना सडकमा दिनहुँ हुन्छन् । मैले जे देखे त्यो एक प्रतिनिधि घटना मात्रै थियो । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेका कारण ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्नुलाई गलत मान्न सकिन्न । तर नियम तोड्नेमा ५ सय रुपैयाँ जान लाग्यो भन्ने मात्रै चिन्ता छ । नियम तोडेकोमा कुनै पछुतो छैन । किनभने यस्ता नियम दिनहुँ उनीहरु तोड्छन् । पक्राउ पर्ने चाहीँ आक्कल झुक्कल मात्रै हो ।
महिलाको विषय संवेदनशील हो भन्ने ज्ञान अझै पनि धेरैमा छैन । भए पनि वास्ता गरिँदैन । प्रहरीको नौ महिने तालिममा ठोक भन्दा ठोक्न र रोक भन्दा रोकन मात्रै सिकाइन्छ भन्ने टिप्पणी नौलो होइन ।
female tempoo driver ma timri swashni hu? traffic harassment